Yandisa ukhangelo lwewebhu ngonxibelelwano lwethu lweWi-Fi | Iindaba zeGajethi
Malunga neminyaka eli-10 eyadlulayo (phantse) xa i-Intanethi yayiyeyona mithombo yeendaba icelwe ngu oza kuyisebenzisa kunye nomnxeba, isantya sokufikelela sesinye sezona zihlwempuzekileyo kunye neyona ndawo iphakathi kwiindawo ezithile zehlabathi. Into esinayo ngoku njengonxibelelwano lweWi-Fi ayisiyonto xa ithelekiswa nento ebesinokuba nayo ngelo xesha.
Ukulandela ngelo xesha (malunga neminyaka eli-10 eyadlulayo) abantu abaninzi bazamile ukufumana esona sisombululo sisiso phucula ukukhangela kwi-intanethi, ukusebenzisa inani elikhulu lezicelo eziguqulwe ngokwasemthethweni ezinye iiparameter ukuba zibe nesantya se "turbo", into engasebenziyo enokuthi ithathelwe ingqalelo njengenkohliso kuye nabani na osivelileyo. Ngexesha lanamhlanje Abantu abaninzi basebenzisa uqhagamshelo lweWi-Fi ukukhangela i-Intanethi, into enokuphuculwa ngeendlela ezimbalwa kunye neengcebiso zokwenyani kunye namaqhinga, esiya kuthi siphakamise apha ngezantsi.
1 1. Isinxibelelanisi esifanelekileyo seWi-Fi ngaphandle kweendonga eziphakathi
2 2. Kunqande izinto eziphakathi phakathi kwendlela kunye neselfowuni
3 3. Nciphisa ukusetyenziswa kwezixhobo ezingenazingcingo kunye nezixhobo
4 4. Iimpondo ze-omnidirectional vs. engangqinelaniyo
5 5. Buyisela amakhadi enethiwekhi kunye ne-router
1. Isinxibelelanisi esifanelekileyo seWi-Fi ngaphandle kweendonga eziphakathi
Esikucebisayo kweli nqaku ziingcebiso ezifanelekileyo kwiimeko ezininzi ezingenanto yakwenza nezicelo zomntu wesithathu. Ngale ndlela, indawo apho ufezekisa khona Ukufumana i-router yakho kuya kuba ngumgaqo osisiseko wonxibelelwano lwakho lwe-Wi-Fi ukuze lusebenze kakuhle kwiindawo ezahlukeneyo ekhaya lakho okanye eofisini. Kuyimfuneko ukuzama ukunqanda iindonga eziphakathi okanye ukuba zimbalwa kangangoko ukuze uqhagamshelo lweWi-Fi lufikelele phantse kuyo yonke indawo apho luya kusetyenziswa khona ngeefowuni ezahlukeneyo okanye iilaptops.
Umzobo esiwubeke phezulu sisampulu yayo, apho ibekwe khona ichaphaza elibomvu njengendawo yendlela yethu. Kukhetho lokuqala (icandelo eliphezulu lomzobo) umzila ubekwe kwindawo embi, oku kungenxa yokuba amagumbi C no-E aya kufumana elinye ukuba lihlwempuzekileyo. Igrafu esezantsi, kwelinye icala, lukhetho olufanelekileyo, kuba umqondiso uya kuzama ukufikelela kumagumbi ahlukeneyo kwindawo ethile ngokulinganayo.
2. Kunqande izinto eziphakathi phakathi kwendlela kunye neselfowuni
Nangona sitshilo isixhobo esiphathwayo, uqhagamshelo lweWi-Fi lokujonga kwi-Intanethi lukwilaptop. Izinto esizenzileyo ekubhekiswa kuzo nekungafuneki zibekho embindini wale misebenzi mibini yokusebenza yifenitshala yesinyithi (njengalawo omandla omninzi wokusebenzisa umzimba), izinto zokupholisa amanzi, izibuko kunye nezinye ezimbalwa.
Kutheni sisitsho nje? Kungenxa yokuba uninzi lwezinyithi lunokuthintela ukuhamba okuqhelekileyo kwamaza ahambayo; Ngokumalunga nokupholisa, amanzi anokuwuthomalalisa umqondiso we-2,4 Ghz, imeko eyenzeka nakwizipili, kuba eyokugqibela ihlala inezinto ezizodwa zokwaleka ngasemva ezithatha imiqondiso kwesi sihlandlo.
Kufuneka wenze ntoni emva koko? Kuya kufuneka senze umgca wentelekelelo phakathi kwendlela kunye nesixhobo esiphathwayo (okanye ilaptop), singabinazo ezi zinto sizikhankanyileyo embindini ukuze amaza angatyhafi kunxibelelwano lwethu lweWi-Fi.
3. Nciphisa ukusetyenziswa kwezixhobo ezingenazingcingo kunye nezixhobo
Ukuba uqhagamshelo lweWi-Fi lusebenzisa isantya se-2.4 GHz, inani elikhulu lezincedisi esisebenza nazo mihla le linokubakho kwangolo hlobo lunye, apho kufuneka zisuswe kangangoko kunokwenzeka.
Ngokukodwa sibhekisa kwiigundane, kwiikhibhodi, kwiiprinta, okanye kwenye i-router engenazingcingo. Njenge-anecdotal njengoko inokubonakala ngathi, ii-microwaves zisebenza nakwimvamisa ye-2.4 GHz, into leyo Ingabangela ukuphazamiseka okuthile kunxibelelwano lweWi-Fi esiyisebenzisa kwi-Intanethi.
4. Iimpondo ze-omnidirectional vs. engangqinelaniyo
Kukho iimodeli ezithile zeendlela ezinee-eriyali, ezijongene nokukhupha kunye nokuthumela amaza afanelekileyo kunxibelelwano lwe-Wi-Fi; Ezi eriyali zihlala zincinci kakhulu, into esiba yingxaki enkulu kuba obu bungakanani, Uluhlu lwezenzo luya kuncitshiswa yile nto. Iingcali zekhompyuter zicebisa ukuba kuthengwe i-eriyali enkulu enokuthi ithathe indawo yayo yokuqala efakwe kwi-router.
Ngoku, kukho omnidirectional kunye nee-eriyali ezingafaniyo, umahluko omkhulu phakathi kwazo nganye. Abokuqala baya kuthumela uphawu loqhagamshelo lweWi-Fi ngendlela engalungelelananga kuwo onke amacala, esi sisizathu sokuba siphulukane nonxibelelwano lwethu lwe-Intanethi. Eyona nto ilungileyo yile Sebenzisa ii-eriyali ezingacaciswanga ngokudibeneyo kunye nokuphinda-phinda iWi-Fi pUkuphucula ukwamkelwa komqondiso.
Ngokubuyela kwi-Wi-Fi, impazamo enkulu kukuyibeka apho uphawu luhlala buthathaka. Eyona nto ilungileyo cvula aba baphindayo kwindawo apho uphawu lusomelele khona ukuze uyiqokelele kwaye ke uyihambise komnye umphindayo.
5. Buyisela amakhadi enethiwekhi kunye ne-router
Ukuba yonke into ebesiyicebisile ngaphambili ayisebenzi, ingxaki inokuba kwindawo yemvelaphi; umzila unokuthumela isibonakaliso esibuthathaka okanye esiphakathi, kufuneka utshintshelwe eyahlukileyo nangona, lo msebenzi ungangqinelana nenkampani ekubonelele ngenkonzo ye-Intanethi. Ngokubhekisele kumakhadi enethiwekhi, ukuba usebenzisa ikhompyuter yakho yobuqu kuya kufuneka uqwalasele ukutshintshela kwesi siqwenga sehardware, into eya kuthi ngokuqinisekileyo ixabise malunga ne-30 yeedola ngokuxhomekeke kuhlobo olukhethileyo.
Kule nqaku sinike iinkcukacha ngemiba embalwa ekufuneka uyithathele ingqalelo xa phucula ukukhangela kwiwebhu ngonxibelelwano lwakho lweWi-Fi, Ingcebiso yokuba kude kangangoko asikhange sisebenzise izixhobo zomntu wesithathu kodwa, ingqiqo encinci kunye nemigaqo esisiseko yekhompyuter.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ungasonyusa njani isantya sonxibelelwano lweWi-Fi neengcebiso ezisebenzayo
Ulihlaziya njani iVenkile yokudlala kuhlobo lwamva nje